Ilay tendrombohitra Mediteraneana. Torolàlana ho an'ny voajanahary: famerenana sy fanamarihana - Ikkaro
firosoana >> boky >> Fanamarihana sy fanamarihana >> Ilay tendrombohitra Mediteraneana. Torolàlana ho an'ny voajanahary
Ary ny zavatra tiako dia ny bibliographique be dia be sisa tavela tao aminy ary tiako horesahina mba hanitatra lafin-javatra sasany mahaliana ahy.
Tena sarotra ny mahazo ny naoty rehetra amin'ity lahatsoratra ity, satria saika hanana ny boky iray manontolo amin'ny bilaogy aho. Rehefa vitsy ny naoty dia ataoko. Ity misy topy topimaso momba izay mety ho hitanao ary rehefa manoratra momba ny karazana, fifandraisana, toeram-ponenana sns aho dia hampiditra an-tsoratra manokana izay noraisiko ho azy ireo tsirairay.
Hevitra vitsivitsy fotsiny mahaliana momba ny toetr'andro sy ny onenan'i Mediterane.
Mahaliana anao koa izany Mpanolo-tany iray sahiranas
Momba ny toetrandro Mediteraneana
Toetrandro mafana sy antonony ny toetrandro, miaraka amin'ny fahavaratra sy maina ary ny ririnina malefaka.
Ny mampiavaka ny toetr'andro mediteraneanina dia ny vanim-potoana maina miaraka amin'ny toetr'andro sy ny vanim-potoana mafana.
Ity toetr'andro mediteraneana ity dia mitranga any amin'ny faritra 5 hafa amin'ny planeta. (Afrika Andrefana Andrefana, Aostralia atsimo andrefana Andrefana, Chile afovoany, Kalifornia ary ny Basin Mediterane)
Antsoin'izy ireo hoe tropikaly kely izy ireo. Ny faritry ny Mediteraneana dia ireo zavamaniry maro karazana indrindra amin'ny faritra antonony eto an-tany, ary koa manana amphibiana sy biby mandady ary indrindra ny endemisma marobe.
Ity ilay faritra tiako indrindra. Azavao ireo fonenana 5 mety ho hitantsika ary tsy fantatro. Karazan-javaboahary terestrialy terrestre 5.
Ala Mediteraneana. Ala ambany (10m - 20m) ary na eo aza ny zavatra inoan'ny olona, ​​ny ala any an-ala dia kely lavitra noho ny any amin'ny toeram-ponenana hafa.
Maquis maquia, macchia. Rehefa simba ny ala noho ny fianjerana sy / na afo sns ... dia manjavona ireo hazo goavambe ary mandalo ny fanjakan'ny ala voadio, miaraka amina hazo vitsivitsy ary maro kokoa ny fikosehana.
Garriga (garrigue). Mikosoka tena mazava, mahazatra ny tany vatosokay. Zavamaniry manitra maro no maniry, ary ny menaka manohana afo manampy azy ireo hiely.
Tomillar (Phrygana,.) Raha mitohy miharatsy ny tany dia mivadika ho thyme ianao, miaraka amin'ny kirihitra kely dia kely, mitovy amin'ny steppe iray, izay ahatongavan'ny thyme, iray amin'ireo zavamaniry mahatohitra indrindra ao amin'ny Mediteraneana,
Roquedos. Matetika izy ireo dia any amin'ny faritra be tendrombohitra, zara raha misy tany ho an'ny zavamaniry ary ny legioma tsotra sy zavamaniry manam-pahaizana manokana dia manjakazaka (ferns, mosses, lichens)
Ny faritra be vato any amin'ny faritra be tendrombohitra ary ny 4 hafa mifandraika amin'ny tontolo tontolo iainana dia avy amin'ny fahasimban'ny teo aloha, noho ny fiompiana, ny fitrandrahana ala, ny afo sns.
Io boky io dia nanome ahy ny fahitana ankapobeny notadiaviko, ho an'ilay tetik'asa izay noresahiko taloha ary, na dia miadana aza dia mbola mitohy: ny fandalinana sy ny fanaovana katalaogin'ireo zavamaniry biby samy hafa sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tontolo iray. fa amin'ny tontolo eo an-toerana., izany hoe any amin'ny faritra misy ahy. Na dia eo amin'ny sehatra web aza dia namoaka lohahevitra manokana toy ny rakitra sasany aho ny centaure na momba ny mihetsiketsika, mitombo hatrany ireo naoty sy antontan-taratasy.
Tetikasa maharitra izay haiko tsikelikely.
Sokajy boky, toetra, Fanamarihana sy fanamarihana Ticket navigation
1 Momba ny toetrandro Mediteraneana
2 Toerana onenana
3 Ao Ikkaro